Adobe Audition ikozvino inowirirana neApple's M1 processor | Ndinobva mac
Ignacio Sala | 12/05/2021 18:00 | Noticias, Mac zvirongwa
Sezvo mwedzi unoenda, mashandiro eiyo hofori Adobe anovandudzwa zvishoma nezvishoma kupa native rutsigiro rweApple ARM processor, inonzi Apple Silicon. Iyo yazvino kunyorera kubva kune uyu mushambadzi kutsigira Apple's M1s ndeye Adobe Audition.
Zvinoenderana nekambani, iyi vhezheni itsva inopa kuita nekukurumidza zvakanyanya kupfuura avo vakaitangira, sezvazviri zvinojairika mushanduro idzi. Uye zvakare, kubva kuAdobe ivo vakawedzera basa nyowani kubvisa runyararo mumarekodhi otomatiki uye pasina kukanganisa iko kwekupedzisira mhando.
Adobe inotaura kuti iyo nyowani vhezheni inoenderana ne M1 processor inovandudza mashandiro ekurekodha uye kusanganisa kwemhando yepamusoro odhiyo zvemukati. Pakati pekuvandudza kwakanyanya kwatino kupihwa neshanduro iyi mkukurumidza kusanganisa uye kupa kweyekuteerera mhedzisiro pamwe neicho chaicho-chenguva mhedzisiro kune iyo Spectral Visualization Edhi
Nekudaro, haazi ese akanaka mashoko, saiyeCD kurekodha hakuwanikwi. Zvevhidhiyo mafashama, macodecs; DV, XDCamEX, FastMpeg, DNX, Sony 65, uye Cineform hazvisi izvozvi zvinotsigirwa neAudition paM1.
Iyi vhezheni itsva inosanganisira basa Bvisa kunyarara, basa rinotendera kuti ubvise uye kubvisa nzvimbo dzakanyarara dzemarekodhi pasina kurasikirwa nekuenderana nemamwe matiraki atiri kushanda nawo. Iri basa rakanakira kuchenesa kubvunzurudzwa kwezwi rekodhi senge podcasts kana odhiyo zvemukati.
Iyo parameter yeiri basa inogona kugadziriswa yezviitiko zvakasiyana senge maruva ane ruzha kana huwandu hwakasiyana hwevhoriyamu pakati pevanhu vanobatanidzwa mukurekodha uye zvinokutendera kuti uone zviri nyore uye kubvisa matunhu enzira iyo isina zvemukati, kuchengetedza nguva uye nguva muzvirongwa.
Adobe Audition vhezheni inoenderana neM1 processor zvino inowanikwa kuburikidza neCreative Cloud uye iri vhezheni 1.4.2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Adobe Audition ikozvino inotsigira Apple's M1 processor
Runyerekupe runyerekupe runoratidza kuti Apple iri kushanda pane inotakurika koni